IEBC oo xaqiijisay saxiixyada BBI | Star FM
Home Wararka Kenya IEBC oo xaqiijisay saxiixyada BBI
IEBC oo xaqiijisay saxiixyada BBI
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada dalka ee IEBC ayaa hubiyay in 1,140,845 oo qof oo saxiixyadooda ku taageereen sharci beddel si geeddisocodka warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI loogu sii tallaaba qaado.
Tiradaan ayaa ka mid ah 4.4. milyan saxiix oo ay xoghaynta BBI soo bandhigeen bishii hore.
IEBC ayaa arrinkan u gudbisay afhayeenada wakiillada golaha hoose ee 47-da ismaamul ee dalka.
Hindise sharciyeedkan waa in ay ansixiyaan ugu yaraan 24 ismaamul si loo guda galo geeddisocodka lagu beddelaya qaar ka mid ah xeerarka wadanka.
Guddoomiyaha xoghaynta warbixinta BBI Dennis Waweru ayaa sheegay in la doonayo in afti dalka ka qabsoomto sida ugu dhaqsiyaha badan.
Next articleDHAGEYSO:BARNAAMIJKA DARYEEL XALQADDA 7-AAD